Tuesday March 31, 2020 - 16:23:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Magaalada Paris ee caasimadda wadanka Faransiiska waxaa cudurka Carona Virus ugu dhintay mid kamida madaxweynayaashii ugu caansanaa qaaradda Afrika.
Jack Joachim Yumbe Obango oo mar soo hoggaamiyay dalka jamhuuriyadda Congo Brazzaville ayaa la xaqiijiyay in uu caabuqa Carona udhintay, madaxweynaha dhintay ayaa 81 sana jir ahaa waxaa la sheegay in muddo 5 maalmood ah uu caabuqa la xanuunsanayay.
Afhayeen u hadlay dowladda Congo ayaa xaqiijiyay geerida madaxweynihii hore ee wadankaas oo muddo 10 sanadood ah qaab magangelyo siyaasadeed ah ujoogay Faransiiska.
Jack Joachim Yumbe Obango ayaa dalka Congo Brazzaville maamulayay intii u dhaxaysay sanadihii 1977 illaa 1979, balse mar kale ayuu talada wadanka dib ugusoo laabtay isagoo sanaddii 1993 noqday R/wasaare iyo madaxweyne ku xigeen.
Waa qofkii ugu caansanaa ee kasoo jeeda qaaradda Afrika oo caabuqa dilaaga Carona udhinta, wadanka Faransiiska wuxuu ka mid yahay wadamada qaaradda Yurub ee uu halaagga ka geysanayo caabuqan halista ah ee Covid19.